Ikhishi - endaweni bavakashela kakhulu endlini efulethini. Lapha sibona ukupheka ukudla, eqinisweni, sidla. Ngenxa yalesi sizathu, ekhishini uthola ezingcolile. Omunye izixazululo ayetholakala ngokuya okusheshayo esibatshela lenhlanzeko ekhishini iphinifa. Ikhishi iphinifa ngokuthi endaweni odongeni, okuyinto wabeka Tile, flooring, ingilazi - konke ungakwazi ngokushesha ukuhlanza ukungcola. Ngaphambi kokuba uqale udinga uzinqumela, kungani udinga iphinifa ekhishini. Hlobo luni umsebenzi ke bazocula ekhishini lakho?
Ukusebenza iphinifa ekhishini
Cabanga imisebenzi esemqoka eyenziwa lesi sici esibalulekile wezangaphakathi. Okokuqala, lokhu kuba umsebenzi zokuhlobisa. Kusemqoka ukuthi iphinifa ekhishini ehlotshisiwe wathela ngokuphelele phakathi emaqaqasini ekhishini, yahamba futhi kugcizelelwe ubuhle amayunithi ekhishini, noma, Ngakolunye uhlangothi, edonsa zonke ukunakekela ngokwayo nokukhanya yayo emangalisa futhi ubuhle izivakashi zakho. Okwesibili, ukusebenziseka. Iphinifa kufanele bavikele udonga phakathi yasenhla nemithombo yasenzansi ekhishini amakhabethe, kanye echibini nesitofu ekutholeni amanoni amanzi ngesikhathi esifanayo kumelwe abe lula ugeze off. Okwesithathu, indaba kuyiphi iphinifa senziwa kufanele ibe ukumelana insipho kanye isinyathelo mechanical, isb ukuhilizisana phakathi ukuvunwa.
Ithanda, iphinifa ekhishini kwakuhambelana nokuka nalezi zimfuneko ezintathu. Ukuze uthole inzuzo enkulu zangaphakathi ekhishini ngakho, kubalulekile usibeka endaweni efanele. Abantu ngokuvamile bayazibuza ukuthi ungenza ngaphandle iphinifa ekhishini. Mhlawumbe ekhishini yakho sekuphelile ngokhethe noma udonga panel ke efakwe ke iphinifa uthela kuphela umsebenzi zokuhlobisa, nokusetha ke kuncike kuphela izintandokazi zakho siqu.
Ake sithi ekugcineni ayeqiniseka isidingo ukufakwa iphinifa ekhishini ekhishini lakho. Khona-ke into kuphela ukwenza, udinga ukukhetha impahla zazo zizokwenziwa ka ucezu lwakho olusha ifenisha, kanye ukwazi ngaphansi kwaziphi ifomula ibalwa iphinifa ububanzi.
Zonke brilliant - nje
Indlela elula futhi okungenani ebizayo isixazululo - odongeni panel. abakhiqizi abaningi ifenisha ukunikela abathengi yokukhetha odongeni panel nangebala njengoba phezulu etafuleni. Ungathenga sabo bebonke kanye ekhishini zabo. Lezi panel zimane nje le laminated amaphepha chipboard, zinjalo nje kancane ohlabayo kuka lo worktop. iphaneli odongeni enjalo, ungakwazi kalula ukufaka ngokwakho, noma-ke sizomisa ikhishi lakho abaqoqi. It has Ubukhulu ejwayelekile. Kulokhu, ububanzi iphinifa ibalwa ngokuthi "Standard". Naphezu lula ukufakwa iphinifa enjalo sibukeka sisihle futhi linesizotha iyasebenza. umbala waso ngokuvamile zikhethwa umbala countertops. Lokhu ekhishini ubukeka obunobunye ifaniswe kahle, futhi-ke, asihlali ngaphandle ukunakwa izivakashi zakho. Ukuze Butt countertops nodonga iphaneli singenalo angena umswakama, uthuli nezibi, okuyinto ihehe izinambuzane yasekhaya, ke Uvale zihlalo endaweni ekhethekile. Le ndawo ingaba ngokuphelele yimuphi umbala.
Namuhla, iphinifa obanzi kunayo Tile. A ezahlukene tile abakhiqizi, ezihlukahlukene ukwakheka kanye Palette enkulu imibala ikuvumela ukuba wenze ekhishini iphinifa yakho ngabanye futhi eyingqayizivele. Inkinga nje ukuthi kuphakama esimweni Tile ekhishini - yilokhu okudingayo ukubeka iphinifa ukuze ukufakwa ekhishini amayunithi. Kulokhu, kufanele wazi ngaphansi kwaziphi ifomula ibalwa ububanzi. Ububanzi esezingeni iphinifa ekhishini 600 mm. Kungcono uma emaphethelweni kukhona ezakhelene imingcele amakhabethe ekhishini, kodwa ngokuvamile lokhu cishe nzima ukufeza. Ngakho-ke kuyadingeka ukuba abeke tile ngemajini kwabanye amakhabethe ehlanganiswa emaphethelweni Tile.
Ngokusho ifomula ibalwa ububanzi iphinifa
Endabeni osayizi esezingeni ekhishini iyunithi odongeni Tile ibekwe ezingeni ukuphakama 850 mm. Endaweni lapho hood itholakala, Tile okufanele akhuphuke emaphethelweni engenhla amakhabethe choma ukuphakama iphinifa kule ndawo ekupheleni ongafinyelela 120-150 cm kuncike ukuphakama-wall units. Ububanzi iphinifa ekhishini okwamanje kuncike ububanzi hood oyikhethile, plus 5 cm ohlangothini ngalunye. Ngakho, lapho le hood nobubanzi 50 cm ububanzi iphinifa kuyinto cm 60, futhi ngezinye ububanzi umdwebo cm 60, ngokulandelana -. 70 cm uma ufaka umshini wokuwasha ekhishini iphinifa kumele kuqale ngandlela-thile aphansi kunokujwayelekile, isb cishe ngesikhathi ibambene 83 cm kusukela ubulili, yona ububanzi bayo kulokhu 62 cm.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ngaphansi kwaziphi ifomula ibalwa ububanzi iphinifa, ungakwazi kalula ukubala inani elidingekayo tile ngaye. Ukwenza kukhethwa tile, kufanele sikhumbule ukuthi textured amathayili nzima anakekele. usayizi isichuse Kuthinta ukukhetha kwakhe. amathayili Okukhulu ukulingana kusheshe futhi kube lula kubekwa amathayili 10 x 10 cm ubukhulu kuyoba ezibizayo. Kwembala kukuwe, nje umbala izintandokazi zakho ukudlala indima lapha. Ungakwazi pick up tile ukufanisa usule, futhi kungaba, kunalokho, ukudlala ngomahluko. Konke kuncike kuwe.
Okunye embodiments we amaphinifa ekhishini
An isixazululo ezithakazelisayo elele tile isithombe, lapha njengoba isithombe kungaba yisiphi isithombe esikhulu-format noma isithombe eyinsakavukela. Kulesi samuntu, ububanzi iphinifa ekhishini is kushintshwe umbono izithombe.
Kuyanda kungolunye uhlobo lwesigemegeme Tile - nesibuko kuyiqiniso lokho kuzodinga umzamo omkhulu kusukela Omuny ukuhlanza.
Elinye ikhambi ezithakazelisayo kungaba iphinifa ngengilazi tile noma yamatshe. Ngaphezu kwalokho, abaklami zinikeza ezihlukahlukene ongakhetha iphinifa yengilazi noma ingilazi laminated.
Ukukhetha iphinifa wenza
Uma ngabe ucabange ezahlukeneyo eziningi ekhishini amaphinifa, bafunda yefomula sinquma ububanzi iphinifa, ungathola ngokuphepha ukusebenza. Umphumela incike izifiso namakhono enu. Mhlawumbe nge tile Ceramic kuyoba kunzima ukusingatha, futhi ikakhulukazi ukuhlomisa ikhishi lakho iphinifa tile ingilazi isithombe yamatshe, kodwa kukhona njalo enye, okuyinto kuncike nasezinganeni wena. Bobumba noma ingilazi ungayithola enye by plastic. Ukufakwa ekhishini plastic iphinifa kudinga ubuchwepheshe kancane. Ngesikhathi okubi kakhulu, ungahlala umeme master, ngubani enze imisebenzi ku ukufakwa iphinifa ezingeni okhokhelwayo.
Esakhelwe ngaphakathi hood ngoba ekhishini. Ukwenza isinqumo esihle
Uzisebenzisa kanjani isisefo Ukukhetha Water
Microwave Midea: incazelo, izici nemibono nabanikazi
Sauce Oyster. izitsha Original etafuleni lakho
Izikebhe ZasePlastiki Zokukhiqizwa Kwe-Russia Noma I-aluminium
Ukuwohloka esiswini: omsakazo kanye pathogenesis
Original Snowflake Ballerina Paper: workshop
Izixhumanisi Iwebhusayithi Mahhala
Isidakamizwa "Tiberal". Imiyalo yokusetshenziswa